mardi, 17 septembre 2019 21:51
Fantatrao ve: Inona izany garantie de construction?
Retsika tatoato, fa anisan'ny nisafidianana ilay orinasa hanao ilay lalana mampitohy an'i Toamasina sy Fenoarivo atsinanana, dia izy orinasa malagasy, ary nanome antoka na "garantie" 50 taona amin'ny asa ataony, ka raha misy ny fahasimbana, hoy ny filoham-pirenena ao anatin'ny 50 taona, dia ilay orinasa no manamboatra ny simba.
Raha raisina amin'izay tokoa, dia tena mahavelombolo satria dia izay asa natao tsy hiverenana intsony ao anatin'ny 50 taona fa mandry ivohon'ny vato.
Fa inona tokoa moa izany ny antsoina hoe "garantie de construction"?
Ny fotodrafitrasa iray, toy ny lalana, dia eo ampiheverana ny fanamboarana azy, dia kajiana hoe aharitra firy taona ity lalana amboarina ity? Ka dia miainga amin'izay avokoa ny kajy rehetra.
Eto izany dia matoa ny mpanamboatra lalana manolotra antoka 50 taona, dia heverina izany fa aharitra 50 taona ny fotodrafitrasa na ilay lalana atao (durée de vie 50 ans).
Nifantoka tamin'ny hijerena vahaolana manoloana ny asa famokarana, izay miantomboka amin'ny akora fototra, ka hatramin'ny vokatra azo avy amin'ny fanodinana, ny fihaonan’ireo tompona orinasa sy ireo mpandraharaha misahana ny famokarana savony, izay nahitana solontena avy ao amin'ny Savonnerie d'Antsirabe, SOCITA, groupe SIPROMAD, SICOMA... tamin’ny Minisitry ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana, Rakotomalala Lantosoa, tetsy amin'ny ministera Ambohidahy, ny 06 septambra lasa teo.
Hitsinjovana ny tombontsoan'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny kalitaon'ny vokatra sy ny vidin’entana mari-toerana no isan’ny anton'izao fihaonana izao.
mardi, 17 septembre 2019 20:08
Morondava: Ankizy miisa 1 000 nizarana « kit scolaire » maimaimpoana
Notoloran’ny Association SOATIRY fitaovam-pianarana maimaimpoana ny ankizy miisa 1 000 avy amin’ireo Fokontany miisa 18 eto an-drenivohitry ny Faritra Menabe.
Fikambanana misehatra amin’ny ara-tsosialy, fa indrindra ny fampianarana sy ny fahasalamana ny Association SOATIRY. Tolo-tanana ho an’ireo Ray aman-dreny ho fiatrehana ny fidiran’ny mpianatra izao no anton’ity hetsika nataony.
mardi, 17 septembre 2019 19:59
Famatsian-drano: Andrasana amin’ny faran’ity herinandro ity ny vokatra eny Amoron’Ankona
Raha tamin’ny 10 septambra 2019 ny tetiandro nofaritana hidirana amin’ny andrana amin’ny famokarana rano eny amin’ny toby vaovao naorina eny Amoron’Ankona – Ambohimanambola Antananarivo Avaradrano, ho fanatsarana ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ny faritra Atsinanan'Antananarivo dia amin’ny faran'ity herinandro ity no ho tonga ny rano aorian'ny fitiliana sy andrana farany.
Tonga ary efa andalam-pametrahana ireo paompy lehibe efatra nandrasana ahafahana mamita ny asa.
mardi, 17 septembre 2019 19:02
Analavory: Dahalo raindahiny roa lahy voasambotry ny Zandary
Ny alakamisy 12 septambra 2019 teo ireto dahalo raindahiny roalahy ireto no voasambotry ny Zandary avy ao amin’ny Poste Avancé Analavory, Distrika Miarinarivo.
Nangalatra omby efatra tao amin’ny Fokontany Ambatomenaloha, Kaominina Analavory izy ireo ny alin’ny 11 septambra 2019. Saika hamidy aty Antananarivo ireto omby vositra ireto.
Nataon’ny Zandary, niaraka tamin’ny Fokonolona ny fanarahan-dia ireo olon-dratsy. Noraisim-potsiny eo amin’ny kizon’Antanetimboahangy ireo dahalo, tsy afaka nampiasa ny antsy lava sy lefona teny ampelan-tanan’izy ireo.
Natolotra ny Fampanoavana tao Miarinarivo androany ireto dahalo ireto.
La non-candidature de l’ancien président de la République Ravalomanana Marc à la mairie d’Antananarivo, et la candidature d’Andriantsitohaina Naina, ont quelque peu surpris certain observateur de la vie politique malagasy.
Depuis quelques semaines, beaucoup spéculait sur le nom du porte-fanion du Tiako I Madagasikara (TIM), Ravalomanana Marc, qui se veut aussi comme le chef de l’opposition à l’actuelle administration, malheureusement pour les spectateurs, le 3ème round n’aura pas lieu.
De l’autre côté, le microcosme tananarivien se demandait aussi, qui sera le porte-étendard des pro-Rajoelina, et que grande fut la surprise en sachant que c’est l’actuel chef de la diplomatie Andriantsitohaina Naina qui défendra la couleur de l’IRD.
mardi, 17 septembre 2019 10:11
Rasolomampionona Hasimpirenena: Ho fantatra amin’ity herinandro ity ny hoaviny
Hiakatra fitsarana ao amin’ny Pôle Anticorruption (PAC) Rasolomampionona Hasimpirenena, Inspekteran’ny fananantany, ary Tale jeneralin’ny fananantany teo aloha, izay voafidy ho solombavambahoaka tao Fandriana, Faritra Amoron’i Mania tamin’ny fifidianana natao ny 29 aprily 2019 lasa teo.
Kolikoly: Polisy telo mpanao pasipaoro nafindra toerana
Nidina tao amin’ny sampan-draharaha fanaovana pasipaoro, sahanin’ny Polisy, nijery imaso ny fomba fiasa ao ny minisitry ny filaminam-bahoaka ny Contrôleur général de Police, Rafanomezantsoa Roger. Polisy telo no nesorina avy hatrany tao amin’io sampan-draharaha, ary nafindra toerana ao Tsaralalana amin’ny mpisahana ny fifamoivoizana, noho ny resaka kolikoly.
Hametrahana « caméra de surveillance » ao amin’io sampan-draharaha fanaovana pasipaoro ankoatra ny fandaminana ny fomba fiasa. Anisan’ny fanapahan-kevitra noraisina ireo taorian’io fitsirihana io.
mardi, 17 septembre 2019 09:51
Fahasalamam-bahoaka: Mamely ny aretin-kibo sy gripa
Tsy mahazaka ny fiovaovan’ny toetr’andro ny zaza, hany ka betsaka no tratry ny aretin-kibo, mivalana.
Ny lehibe indray dia ny gripa no mpahazo azy noho io tranga io ihany.
mardi, 17 septembre 2019 09:42
Mpanao gazety niakatra Fitsarana: Hivoaka amin’ny alakamisy ny didy
Andrasana amin’ny alakamisy 19 septambra 2019 ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha nitorian’ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika Malagasy ny mpanao gazety telo mianadahy, Nadia Raonimanalina (Le Quotidien), Arphine Helisoa (CUA Serasera), Mahery Rabearivony (24h Mada) sy Patrick Andriamisa Ramihone, Talen’ny kolontsaina ao amin’ny Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo, tamin’ny famoaham-baovao mikasika ny fitsofohan’ny helikopteran’ny Tafika tao amin’ny kianja monisipaly Mahamasina ny zoma 30 aogositra 2019.
Naharitra adim-pamantaranandro telo ny fitsarana azy ireo omaly tao amin’ny Tribonaly Anosy.